Kordhinta baradhada koonfurta Brazil. Khibradda Beeraha - Majaladda Nidaamka Baradhada
Isniin, Maarso 8, 2021
Magacaygu waa Adril Setlik iyo baradhada ayaa ah dalaga ugu weyn ee qoyskaygu soo korayay muddo ka badan 60 sano. Nasiib darrose, xitaa beero leh sanooyin badan oo waayo-aragnimo u leh beeraha kuma jiraan caymis ku saabsan luminta faa'iidada. Si aan kalsooni u helno mustaqbalka, xilli ciyaareedkii hore waxaan la galnay qandaraas ku saabsan soo saarista alaabada wershadeynta. Markaa, waxaan awoodnay inaan hagaajinno qiimaha iibinta badeecadeenna ugu dambeysay.
Beeraheena waxay ku yaalliin gobolka Rio Grande do Sul, oo ay abaartu ku dhufatay xilli ciyaareedkii hore, kaasoo horseeday hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii. Waxaan ku beernaynay baradhada gobolkaan 20 sano in ka badan, waxaanan dhihi karnaa tani waxay ahayd abaartii ugu xumeyd ee aan ku aragnay gobolka.
Taariikh ahaan, gobolkeenu wuxuu leeyahay xad wanaagsan roobab sanadka oo dhan, laakiin waxaan rabnaa inaan damaanad ka qaadno inaan natiijo hufan ka helno xilliga cusub. Ujeedadaas awgeed, waxaan kireysanay goobo biyo leh oo la heli karo waraab. Waxaan rajeyneynaa in roobabku ay noqdaan kuwa joogto ah sidii kuwii hore, laakiin xitaa haddii jawigu uusan ahayn sida aan jeclaan lahayn, waxaan wali soo saari karnaa baradhada badan.
Iskaashiga lala yeelanayo warshadaynta waxsoosaarka ayaa bilaabmay sanad cimilo kacsan, laakiin waxaan wali dhiirigelineynaa oo aan aaminsanahay in iskaashiga noocan ah uu ka caawin doono shirkadeena inay si joogto ah u shaqeyso oo ay u abuurto macaash.
Guud ahaan, shaqada qandaraaska iyo u diyaarsanaanta isbeddelka cimilada ayaa ah dariiqa aan u eegi karno mustaqbalka si aan u hubinno maalmo ku habboon reerkeenna iyo beeraheena.
Qoraalka: Vinicius Silva
Tags: Brazilbaradho koraya
Sergey Lisovsky: YUGAGRO waxay muujineysaa sida barnaamijka gobolka ee loogu talagalay horumarinta agro-warshadaha loo fulin doono "
Si ka fiican, laakiin tayo fiican. Dalabka Dalagga 2021
Wax soo saarka bayoolojiga ah si loo ilaaliyo baradhada si hufan